नगद र गैर-नगद पैसा - त्यो भने गर्न सकिन्छ, अर्थव्यवस्था को "रगत"। तिनीहरूले राज्य बजेट, र व्यक्तिगत परिवारको राम्ररी रूपमा मापन गरिन्छ। प्रकृति र पैसा को प्रकार तल वर्णन गरिनेछ।
एक समय मा एक पटक, वर्ष धेरै हजारौं पहिले, एक आदिम समाजमा कुनै थियो परिसंचरण को माध्यम। "फ्लिया" - आर्थिक सम्बन्ध सट्टापट्टा सीमित थिए। तर समाज विकास संग सबै कुरा बराबर केहि पाउन सक्छ कि बाहिर गरियो। मान्छे वस्तुहरु प्रयोग गर्न थाले त्यसैले, सट्टापट्टा मा एक मध्यस्थ को रूप मा कार्य। त्यसैले पहिलो पैसा। को प्रकार ठूलो विविधता द्वारा प्रतिष्ठित। पैसा को भूमिका मांग सबैभन्दा थिए कि उत्पादनहरु थिए। यी हुन्: जनावर, नुन को टुक्रा, बहुमूल्य Furs, दुर्लभ पत्थर, tableware, बहुमूल्य धातु। हाल अन्ततः सबै अन्य पैसा प्रतिस्थापन गर्नुहोस्। सिल्लियां, आभूषण, बारहरू - सुन र चाँदीको उपचार विधिहरू, मूल प्रयोग थिए, को प्रकार। स्थानीय जनसंख्या उपासना गर्ने शासक वा देवताहरूको, छविहरू संग सिक्का, एक सानो पछि देखा पर्नुभयो। तिनीहरूले धेरै दुर्लभ सामाग्री थिए किनभने बहुमूल्य धातु, परिसंचरण को एक माध्यम रूपमा प्रयोग गरिएका र ओक्सीकरण प्रतिरोध, र यसरी आफ्नो उत्पादनहरु एक लामो समय को लागि भण्डारण थिए।
बेबिलोनी साम्राज्य मा, या बरु - ब्याज मा पैसा लिन थाले पहिलो संस्था, मध्य पूर्व मा देखियो। यसलाई सुरक्षित र घर मा लुकाउन भन्दा बढी लाभदायक थियो यस्तो सुरक्षित ठाउँमा सुनको ठूलो रकम भण्डारण गर्नुहोस्। युरोप मा बैंकिंग को पछि अवस्थित भएनन् छ रोमी साम्राज्यको पतन। तर यो पहिलो पछि पुनर्जीवित Crusades। प्रारम्भिक अठारौँ शताब्दीमा युरोपेली बैंकहरू तिनीहरूलाई खाता राख्नु भएको थियो कति पैसा संकेत, आफ्नो depositors गर्न रसिद जारी गर्न थाले। पनि परिसंचरण को एक माध्यम हो - समय, लगानीकर्ताले बैंकनोट्स भनेर बुझे। यस्तो पैसा सिक्का को भारी र भारी बैग भन्दा टाढा थप सुविधाजनक थियो। पछिल्लो शताब्दीमा, बैंक नोटहरू सुन र चाँदी धक्का गरिएको छ।
त्यहाँ पैसा को एक किसिम हो। आज को प्रकार धेरै विविध छन्। सामान वा सेवा गर्न सक्दैन मात्र बैंकनोट्स भुक्तानी गर्न। पैसा को फारामहरू र प्रकार के हुन्?
बिल - धन को भुक्तानीको एक निश्चित समय पछि दायित्व छ। उहाँले सामान्यतया निष्कर्षमा कारोबार बारे जानकारी छैन। क्रेडिट पैसा बिक्री installments बनेको छ घटनाको प्रयोग गरिन्छ। यस मामला मा कारोबार गर्न दलहरू को एक सहमत म्याद गरेर ऋण चुक्ता गर्न। नोट - छ, वास्तवमा, सदैव ऋण, देश को केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रदान। चेक - यो प्राप्तकर्ता गर्न केही मात्रामा भुक्तानी गर्न आदेश छ। हालैका दशकहरूमा, वैज्ञानिक र प्राविधिक प्रगति को विकास कारण इलेक्ट्रोनिक पैसा देखा छन्। सम्पत्ति कारोबार को प्रकार: प्लास्टिक कार्ड र इलेक्ट्रोनिक प्रणाली। उत्तरार्द्ध धेरै कुख्यात WebMoney, Kiwi, Yandex-धन, र अरूलाई पनि समावेश छ। ई-पर्स पासवर्ड पहुँच र डाटा सुरक्षा सीमित छन्। सबैभन्दा लोकप्रिय र विश्वसनीय इन्टरनेट भुक्तानी प्रणाली हाल WebMoney छ। Webmoney पैसा फिर्ता गर्न, तपाईं फोन नम्बर प्रमाणित गर्न चाहन्छु। तपाईं सिस्टम मा एक पर्स बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो अवश्य हो।
जोरजियन मुद्रा: विवरण र फोटो
टर्की राष्ट्रीय मुद्रा: सबैले पर्यटक जान्नुपर्छ कि
बेलारुस मा नयाँ पैसा (फोटो)
मास्को गरेको protectorate देखि स्वतन्त्रता को एक माध्यम वा उज़्बेक मान्छे को लागि समस्या रूपमा मुद्रा उज्बेकिस्तान
सिम कार्ड खरीद लागि सुझाव र चाल: कसरी पुरानो सिम कार्ड खरिद गर्न सक्नुहुन्छ
बाघ prawns। नुस्खा विनम्रता
Android मा आवेदन कसरी स्थापना गर्ने?
गरीब देश - तथ्याङ्कहरू
सिनाई भिसा - मिश्र मा नि: शुल्क प्रवेश
विस्तार नङ को डिजाइन: विशेष गरी रोचक विचार
किन चक्कु तल्ला गर्न गिर? साइन भन्छन् - अतिथि गर्न